Maqaallo Archives - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda oo loo magacaabay Abaalmarinta Nabadda ee Nololeedka 2021
Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda (GCPE) waxaa loo magacaabay Abaalmarinta Nobel Peace Prize ee 2021. Magacaabistu waxay u aqoonsan tahay ololaha inuu yahay mashruuca ugu firfircoon, saameynta badan, uguna fog ee waxbarashada nabada, sine qua non hub ka dhigista iyo joojinta dagaalka. [sii wad akhriska…]
Sugitaanka Dimuqraadiyadda ee doorashada isku dhacsan: Kheyraadka loogu talagalay barayaasha
Inta lagu jiro doorashada isbedelka, maxaa la samayn karaa si loo ilaaliyo dimuqraadiyadda loona ilaaliyo natiijooyinka doorashada? Sideen uga jawaab celin karnaa baqdin-galinta, afgambi iman kara, dadaallada cabsi-gelinta, iyo rabshadaha rabshadaha wata? Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada ayaa soo diyaarinaya liistada kheyraadka lagu taageerayo barayaasha dadaallada ay ku barayaan xilligan siyaasadeed ee hadda jirta, loo diyaariyo ardayda inay si wax ku ool ah oo aan rabshad lahayn uga jawaabaan hanjabaadaha, iyo inay kobciyaan dimoqraadiyad aad u adag oo waarta mustaqbalka. [sii wad akhriska…]
XIRIIRADA KORONA: Baaritaan ku saabsan Plowshares iyo Faafa
"Corona Connections: Learning for a Cusboonaysiinta Dunida" waa taxane gaar ah oo lagu baarayo COVID-19 faafa iyo siyaabaha ay ula xiriirto arrimaha kale ee waxbarashada nabadda. Baadhitaankani wuxuu sahaminayaa isku-xirnaanta ka dhexeeya sababaha, astaamaha iyo cawaaqibka ka dhalan kara khataraha ka dhasha hubka nukliyeerka iyo aafooyinka adduunka. [sii wad akhriska…]
Fayraska "wadaninimada qalalaasaha"
Werner Wintersteiner wuxuu ku doodayaa in dhibaatada Corona ay muujineyso in caalamiyeynta ay ilaa iyo hada keensatay isku tiirsanaan iyadoo aan la helin wada jir. Feyrasku wuxuu ku faafayaa aduunka, la dagaalankiisuna wuxuu u baahan doonaa dadaal caalami ah, laakiin gobolada ayaa la falgala aragtida tunnelka qaranka. Taa bedelkeeda, aragtida muwaadinnimada adduunka ayaa ku habboonaan doonta dhibaatada adduunka. [sii wad akhriska…]
Dhibaatada ciddiyaha: Aabbihiis iyo masiibo
Qaar badan oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa nabadda iyo caddaaladda ayaa ku baaqay in loo adeegsado waqtigan xasaasiga ah si loo milicsado, loo qorsheeyo loona barto jidkeenna mustaqbal wanaagsan. Mid ka mid ah tabarucaadka aan barayaasha nabada ka geysan karno howshan ayaa ah mid ka turjumeysa fursadaha luqad kale iyo sarbeebyada ay aqoonyahannada cilmiga afafka iyo haweenka u ololeeya muddo dheer isku dayeen inay naga dhaadhiciyaan inaan diiradda saarno [sii wad akhriska…]
Waxbarashada Nabadda iyo Waxbarashada Is-beddelka: Waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga soo qaatay CTAUN 2020 ee UN
28-kii Febraayo, 2020 Guddiga Barista ee Ku Saabsan Qaramada Midoobay wuxuu qabtay shirkii sanadlaha ahaa ee 21-aad ee Qaramada Midoobay kaasoo hal-ku-dheg looga dhigay "Dagaal No More." Tony Jenkins, Isuduwaha ee Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda ayaa ka hadlay munaasabadda ku saabsan waxbarashada nabadda iyo waxbarashada isbedelka. Fiidiyowga dhacdada ayaa hadda la heli karaa. [sii wad akhriska…]
Wanaagsan Wadajir: isu soo dhowaanshaha u dhexeeya Waxbarashada Nabadda iyo Barashada Caadiga ah ee Bulshada waa in la taageeraa meel kasta oo suurtagal ah
Udub dhexaadkooda, PeaceEd iyo SEL labaduba waxay raadinayaan inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka bulshada iyagoo ku martiqaadaya dadka inay aqoonsadaan qiyamkooda la wadaago, ballaariyo aqoontooda ayna horumariyaan xirfadaha ay u baahan yihiin si loo abuuro mustaqbal nabadeed. SEL waxay xooga saareysaa isbeddelka heerarka shaqsiyeed iyo kuwa shaqsiyadeed, halka PeaceEd inta badan diiradda saarto arrimaha bulshada, siyaasadda, iyo nidaamka. [sii wad akhriska…]